बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत सस्तोमा खसीबोका बेच्दै खाद्य, अरु वस्तुमा कति ? – Saurahaonline.com
बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत सस्तोमा खसीबोका बेच्दै खाद्य, अरु वस्तुमा कति ?
काठमाडौं : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गर्दै यो वर्ष करिब ३ हजार खसीबोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ । यस वर्ष कम्पनीले दशैंमा बिक्री गर्ने खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बजार मूल्यभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत सस्तोमा हुने भएको छ ।
‘यस वर्ष कोरोनाको कारण माग कम हुने भएकोले खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा केही कम ल्याउँकी भनेर छलफल भइरहेको छ । हामीले बजार मूल्यभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत सस्तोमा बिक्री गर्ने छौं,’ सुवेदीले भने । कति संख्यामा खरिद गर्ने र कुन ठाउँबाट किनेर ल्याउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए ।